ကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံးမှာအကောင်းဆုံး Full-ကျော၏ 10 မှာတစ်ဦးကကြည့်
by Stewart က Coggin
ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝကျော၏ 10 မှာတစ်ဦးကကြည့်။
ဒံယလေသ Alves (ဘရာဇီး & ဘာစီလိုနာ)
ဒါဝိဒ်သည် Ramos / Getty Images
Alves သူဘရာဇီးအသင်းအတွက်ရှေ့ဆက်သူ့ကို Maicon ရဲ့ caliber တစ်ကစားသမားရှိကြောင်းမိမိကိုမိမိကံကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ အခြားမည်သည့်ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားရေးအသင်း ကိုကမ္ဘာ့, Alves Right-နောက်ကျောမှာအငြင်းပွားဖွယ်မရှိပထမဦးဆုံး-ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ စခန်း Nou မှာထောက်ခံသူများ Alves စွမ်းရည်နှင့်သူ့ကိုမှာအနည်းဆုံးလေးငါးရည်မှန်းချက်များတစ်ရာသီဂိုးသွင်းကူညီပေးနေအခမဲ့-ကန်ယူပြီးစွမ်းရည်ကိုဖြတ်ကူး, ပုံမှန်မှာမိမိအရှိန်အဟုန်ညာခြမ်းလွှမ်းမိုးကြည့်ပါ။ ဆီဗီလာ 2002 ခုနှစ်တွင် Bahia ထံမှထက်နည်း $ 1 သန်းအဘို့သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် 2008 ခုနှစ်တွင်ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းမှာသူ့ကိုကိုရောင်း ပို»
အက်ရှလေကိုးလ် (အင်္ဂလန် & ချယ်လ်ဆီး)
အင်္ဂလန်နောက်ခံလူအက်ရှလေကိုးလ်။ Getty Images
ကိုးလ်နှင့်အတူအိမ်မှာရှိနေတဲ့တယ်ရှိသည်ဟုနှစ်ပေါင်းများစွာအနည်းငယ်ကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စီရော်နယ်ဒို ။ ယူရို 2004 မှာသူတစ်ဦးဖြစ်မည်စစ်တိုက်ရာတွင်ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်ကိုက်ညီတစ်ဦးကအင်္ဂလန်ရှပ်အင်္ကျီအတွက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကိုးလ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပွဲတစ်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးလက်ဝဲ-နောက်ကျောသို့တီထွင်ခဲ့သည်။ သူရှေ့ဆက်ရရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးသွင်း, ဘောလုံးကိုဖြတ်ကူးနှင့်မစ္စတာကျောခြေလျင်လာသောအခါယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိလစ် Lahm (ဂျာမနီ & ဘိုင်ယန်မြူးနစ်)
ဂျာမနီနောက်ခံလူဖိလစ် Lahm ။ Getty Images
နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ဂျာမနီအသင်း၏အဓိကတစ်ခုမှာ full-နောက်ကျောကနေ Lahm ရဲ့ marauding ပြေးဂျာမနီတိုက်ခိုက်မှု၏ကောင်းတစ်ဦး Avenue ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစွယ်စုံ Lahm ပစ်ခတ်မှုနိုင်စွမ်းနှင့်ခြေလျင်ဖြစ်စေနှင့်အတူဖြတ်သန်းသည် ဖြစ်. , တောင်အာဖရိကအတွက်ဒဏ်ငွေ 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ပက်ထရစ်အီဗရာ (ပြင်သစ် & မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်)
ပြင်သစ်နောက်ခံလူပက်ထရစ်အီဗရာ။ Getty Images
ကိုးလ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘောလုံးမှာအကောင်းဆုံးလက်ဝဲ-ကျောအဖြစ်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ အီဗရာသူမှန်မှန်ကူးသို့မဟုတ်ဖြစ်စေရှေ့တော်၌ထိုကွင်းလယ်လူထပ်နေသည်အဖြစ်ရှေ့ဆက်သွားယုံကြည်စိတ်ချရသောကာကွယ်ရေးနှင့်ထူးချွန်သူခက်ခဲတဲ့ဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ် ဘောလုံးကိုဖြတ်သန်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့-အိမ်ထောင်ဖက်မှအတွင်းပိုင်း။ သူသည်အသင်းထဲကမန်ချက်စတာမြို့ရဲ့ Gael Clichy စောင့်ရှောက်ရှိရာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်ပြင်သစ်များအတွက်အီဗရာပုံမှန်အစည်းအဝေး။ 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာကစားသမားပုန်ကန်အတွက်ဆောငျတစ်ဦးအဖြစ်ဝေဖန်မှုများဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Maicon (ဘရာဇီး & အင်တာမီလန်မီလန်)
ဘရာဇီးနောက်ခံလူ Maicon ။ Getty Images
အချိန်ကြာမြင့်စွာနေတဲ့ Right-ပြန်ဂိမ်းတစ်ခုအပေါ်ဤမျှလောက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်းနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်မဟုတ်။ အဆိုပါ အင်တာမီလန်မီလန် ညာဖက်ဆင်းနောက်ခံလူရဲ့မာန်ပြေးသူ့ကိုဘောလုံးကိုဖြတ်ကူးရန်အဘို့အဒါပေမယ့် Maicon ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပေးလျက်ရှိနေပါသည်ဖမ်းရန်ကြိုးစားနေအတိုက်အခံပလေယာတို့ကဖျက်သိမ်းလိုက်သောအာကာသသိမ်းပိုက်နိုင်သူသည်သူ၏အသင်းဖော်များအတွက်သာတိုက်ခိုက်တဲ့အကြီးအ Avenue သည်။ သူကမီးမရှို့ဖို့အရှိန်အဟုန်ရှိပြီးလည်းအစိုင်အခဲနောက်ခံလူဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးအသင်းထဲကထူးချွန်ဘာစီလိုနာ Right-ပြန် Daniely Alves စောင့်ရှောက်။ နောက်ထပ် "
Glen Johnson က (အင်္ဂလန် & လီဗာပူးလ်),
အင်္ဂလန်နောက်ခံလူ Glen Johnson က။ မာကု Thompson က / Getty Images
များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ လီဗာပူးလ် ကို 2009 ဂျွန်ဆင်အတွက် Anfield များအတွက်ငွေကြေး-ဒဏ်ခတ်တော်ပို့စ်မောက် left နှင့်အတိုက်အခံထက်ဝက်သို့မိမိအပုံမှန်အစည်းအဝေး forays နှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးကက်စ်ဟမ်းလူငယ်ထုတ်ကုန်, ဂျွန်ဆင်အမြဲလာသောအခါနောက်ကျောခြေလျင်အတော်လေးအဖြစ်အဆင်ပြေမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအဆင်မပြေအခြေအနေများထဲကရရန်အရှိန်အဟုန်ပိုင်ဆိုင်သောကွောငျ့, မိမိခုခံကာကွယ်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး DIY ဆိုင်ကနေအိမ်သာထိုင်ခုံကိုခိုးယူသည်မိမိပို့စ်မောက်နေ့ရက်ကာလ၌ဒဏ်ငွေ။
Sergio Ramos (စပိန် & Real Madrid အသင်း)
စပိန်နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရာမို့။ Clive Mason ဆို / Getty Images
အဆိုပါ Real Madrid အသင်း ကြယ်ပွင့်နှင့်အဆီဗီလာလူငယ်ထုတ်ကုန်ကိုလည်းစင်တာ-နောက်ကျောမှာဆော့ကစားနိုင်ပေမယ်အများဆုံးညာဘက်အပေါ်တပ်ဖြန့်ထားသည်။ သူရသောအခါကျောခြေလျင်ညီတူညီမျှယုံကြည်စိတ်ချရသောစဉ်စပိန်သည်ဘက်ဆင်းသည်သူ၏စီးနင်းမှုသည်အောင်မြင်သော 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားကင်ပိန်းရှုထောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လျော့နည်းစကားပြော၏တဦးတည်းရှိကြ၏။ အနီရောင်ကတ်များ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကကောက်မယ့်သဘောထားကိုရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် "
Bacary Sagna (ပြင်သစ် & အာဆင်နယ်)
ပြင်သစ်နောက်ခံလူ Bacary Sagna ။ Clive Mason ဆို / Getty Images
Sagna ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာ အာဆင်နယ်အသင်း သည် 2007 ခုနှစ်တွင် Auxerre မှစ. , ပြင်သစ်သူထူးချွန်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းထောက်ပြ, ဒါပေမယ့်အားလုံးဌာနများအတွက်အစားယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ယင်း၌သူ၏နောက်ဆက်တွဲဖျော်ဖြေပွဲ ပရီးမီးယားလိဂ် သူမရှိသလောက်အမှားတွေစေသည်နဲ့သူ့အဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေကြသောအခါတစ်ဦးအစိုင်အခဲထွက်ပေါက်ဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင်းအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ကလပ်နှင့်တိုင်းပြည်တစ် Maicon သို့မဟုတ် Alves ပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ '' ပုံမှအက်ဒီ '' ၏အရှိန်အဟုန်နှင့်အရှိန်အဟုန်အားနည်းလှ၏။ ကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်ဆီနီဂေါတို့ကပယ်ချခဲ့, Sagna ယခုပြင်သစ်အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။
Felipe (ဘရာဇီး & အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်)
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နောက်ခံလူဖိလစ်ပီ။ ဒင်းနစ်ဒို / Getty Images
ကလက်မှတ်ရေးထိုး အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် ဘရာဇီးကသူ၏အမည်အပြည့်အစုံပေးရ, 2010 နွေရာသီ, Filipe Luis Kasmirski အတွက်ဒီပို့, La Coruñaကနေလွှဲပြောင်း window ၏အမြင့်ဆုံးသောပရိုဖိုင်းကိုတစ်ပန်းတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအက်သလက်တီကို Felipe အပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရဖို့ဒီတော့စိတ်အားထက်သန်ကြ၏ သူကပုံမှန်ဆန့်ကျင်ပင်နယ်တီဧရိယာထဲမှာမြင် 2010 ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမားများအတွက်ခူးခံရဖို့နီးကပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်သူတစ်ဦးထိပ်တန်းထပ် Full-နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2009-10 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်တစ်ဦးကကြောက်မက်ဖွယ်ကျိုးခြေထောက်သူရှေ့ဆက်ကြောင်းပြိုင်ပွဲများ၏ယှဉ်ပြိုင်ကစားအလေ့အကျင့်မရှိကြခြင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ခဲ့ဆိုလိုသညျ။ သို့သော်အံ့သြလောက်အောင်သူလေးလအတွင်း Depor များအတွက်အရေးယူမှုမှပြန်လာ၏။
Aleksandar Kolarov (ဆားဘီးယား & မန်ချက်စတာစီးတီး)
ဆားဘီးယားနောက်ခံလူ Aleksandar Kolarov ။ မိုက်ကယ်သံမဏိ / Getty Images
မန်ချက်စတာစီးတီး အတွက်တိုက်ခိုက်နေဆားဘီးယားများအတွက်လာဇီယိုတစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည် $ 29,32 သန်းပေးဆောင် 2010 ခုနှစ်နွေရာသီအတွက်နောက်ကျောကျန်ရစ်သူတို့ကတာဝေးပစ်ရိုက်ချက်များနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ကန်ဘောတွေနဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုလား၏ကန်နှင့်အတူသိမ်းယူနေတဲ့ကစားသမားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံး ရည်မှန်းချက် များအတွက် ရိုးမား Reggina ဆန့်ကျင်ထွက် 40 မီတာကနေရောက်လာတယ်။ အီတလီနိုင်ငံအတွက် '' ဆားဗီးရောဘတ်ကားလို့စ် '' အဖြစ်လူသိများ။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'Or Winners
အားလုံးအချိန် 10 အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမား
စီရော်နယ်ဒို, Real Madrid အသင်းဘောလုံးကစားသမား၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါလူကြိုက်အများဆုံး High School တွင်ဂီတနှင့် Play ဘာတွေလဲ?
နယူးယောက် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏စီးတီးကောလိပ်
Alum crystal ဟာဓာတ်ပုံပြခန်း
'' Est Alléတွင်, '' အဘို့အသဘောတူညီချက်မထည့်သည်ကိုသင်ရှေးခယျြနိုငျ
ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူချောကလက်သင်္ချာ Stumper ၏ထောင့်ကွက်
တစ်ဦးက Black walnut သီးနှံရိတ်သိမ်း
အဆိုပါတိရစ္ဆာန်ရုံမှာတွေ့ရှိခဲ့ 18 Hilary နှင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းလက္ခဏာများ
က de Dato မသန်စွမ်း encontrar con éxito trabajo en Estados UNIDO အခြေစိုက်စခန်းများ
သင့်ရဲ့ဂေါက် Shot အပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းပါဝါလိုင်းများ Hits: စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကဘာလဲ?
ကို '80s ၏ကျော်ကြားနမ်းသီချင်းများ
ဝီလျံဟင်နရီ Harrison - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဝမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ